The Galaxy Tab S7 Lite na-agbapụta na Snapdragon 750G na Geekbench | Gam akporosis
Samsung Galaxy Tab S7 Lite pụtara na Geekbench na Snapdragon 750G
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Samsung na-akwadebe mwepụta nke ọhụrụ mbadamba nkume, nke ga-abata n'ahịa n'oge na-adịghị anya Galaxy Tab S7 Lite.
Ma ọ bụ na nke a abanyela ugbu a na otu n'ime akara ngosi kachasị mkpa, nke bụ Geekbench. Edebanyela ngwaọrụ ahụ na nyocha nke ule na ụfọdụ njirimara ya na njirimara teknụzụ na ndepụta ọhụụ achọtara, yabụ mmalite ya ga-adị na Machị.
Kedu ihe Geekbench kwuru banyere Samsung Galaxy Tab S7 Lite?
Dabere na ihe Geekbench kpughere na ndepụta ya kachasị ọhụrụ banyere Samsung SM-T736B, nọmba ihe atụ nke ga-adaba na Galaxy Tab S7 Lite, a ga-ebuputa ya na Qualcomm's Snapdragon 750G mobile platform, nke nwere isi asatọ, 8 nm ma nwee nhazi ndị a: 2x Kryo 570 (Cortex-A77) na 2.2 GHz + 6x Kryo 570 (Cortex-A55) na 1.8 GHz. Ya mere, mbadamba nkume ahụ ga-esokwa GPU Adreno Ogbe 619.
Ihe ọzọ Geekbench kwuru bụ ihe 4 GB Ram Na, ọ bụ ezie na ọ kọwaghị OS nke ngwaọrụ ahụ, ihe ọ na-emekarị na ndepụta ya, a na-eche na a ga-ebupụta ya na gam akporo 11.
N'aka nke ọzọ, ụfọdụ akụkọ gara aga na Galaxy Tab S7 Lite kọwara nke ahụ ga-abịa na ihuenyo 12.4 nke anụ ọhịa, ya mere "Lite" n'aha ya adabaghi ​​na oke mbadamba nkume ahụ, o kwesiri iburu n'uche. Anyị anaghị ekwu maka obere nwa agbọghọ.
Samsung Galaxy Tab S7 Lite na Geekbench
Bọchị mmalite nke nke a emebeghị ka ụlọ ọrụ South Korea gosipụta ya. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na amalitere Galaxy Tab S6 Lite na Eprel nke afọ gara aga, anyị na-eche na ọnwa a ga-abụ nke a na-eweta tebụl ọhụrụ a, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị oge, iji mara ya March, ọzọ kwupụta ọgwụgwụ. Nke a ka ga-ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy Tab S7 Lite pụtara na Geekbench na Snapdragon 750G